Antsa fiderana :: Hanohy ny « Hiran’ny lanitra » tsy misy an’i Parfait ny VHF • AoRaha
Antsa fiderana Hanohy ny « Hiran’ny lanitra » tsy misy an’i Parfait ny VHF
Fotoana vitsy lasa izay no nodimandry i Lalanirina Parfait, mpanakanto mpanorina ny tarika Vavaka Hira Fiderana (VHF). Na eo aza ny fahabangana, dia nanamafy ny zanany mianadahy, Andrianina Lalaina Toky sy Lalanirina Liantsoa, fa mbola mijoro hatrany ity tarika ity. Miombon-kevitra amin’izy ireo ihany koa ireo mpikambana rehetra ao amin’ny tarika, izay miisa roa ambin’ny folo ankehitriny.
Hanamarika fotoan-dehibe ny VHF, amin’ity taona ity. Fony fahavelony no efa nanomana izany fatratra i Lalanirina Parfait, araka ny nambaran’ireo zanany mianadahy. Feno folo taona ny tarika ka tsy havelan’izy ireo handalo fotsiny io tsingerin-taona io, fa hisy ny fampisehoana lehibe hatao etsy amin’ny CCEsca Antanimena, amin’ny 31 aogositra 2019.
“Hatao hahatsiarovana manokana an’i Lalanirina Parfait ny fampisehoana. Hiendrika tantara ny fanehoana azy eny an-tsehatra satria hovoriana ao avokoa ireo mpanakanto niara-niasa taminy teo amin’ny tontolon’ny zavakanto. Anisan’izany ireo mpikambana taloha tao amin’ny tarika VHF, toa an-dry Mahery, Luck, Sefo, Solofo, Vy ary Bodo”, hoy i Liantsoa, zanany.
Raha hiverenana ny tantara, dia anisan’ireo mpikambana nanamaintimolaly tao amin’ny Zopanage i Lalanirina Parfait. Sady nihira izy no nitendry tao amin’io tarika io. Naharay antso avy any amin’Ilay Nahary ny lehilahy taty aoriana ka nitondra azy teo amin’ny tontolon’ny mozika evanjelika, avy eo nanangana ny tarika VHF.